रोमाञ्चक पर्यटकीय गन्तव्य जहाँ संसारका पर्यटक पुग्न मरिहत्ते गर्छन्, कति पर्छ एकरात बिताउन ? – Wow Sansar
काठमाडौं । मानिसका चाहना पनि अनेकन खालका हुन्छन् ।
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै मानिसले संसारभर नै पैसा कमाउने सोख पनि अनेकन राखेका हुन्छन् । उनीहरुले नयाँ नयाँ प्रकारको सेवा पनि दिने र टन्न पैसा पनि लिने सोचका साथ काम गरिरहेका छन् ।
कोही साइबेरिया पुग्छन्, भने कोही हवाई । कोही गोवामा पुगेर समन्द्रसँग लुकामारी गर्छन् त कोही सांघाई पुगेर रमाइलो गर्छन । यो विगतको कुरा थियो । आगतमा पनि त्यस्तै अवस्था आउला ।
तर पछिल्ला दिनमा संसारभर नै कोरोनाका कारण सबै प्रकारका व्यवसायमा समस्या पैदा भएको छ । मानिसहरु घरबाट बाहिर ननिस्कने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुले आफनो यात्रालाई सबैभन्दा कम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
तपाईले वाइन ब्यारेल, आइसक्रीम आकारको पोखरी, र एक हवाईजहाज पनि भाँडामा लिएर आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । ती स्थानमा तपाईका लागि अनुसन्धानको समय पनि हुन सक्छ ।
त्यसले तपाईको यात्रालाई वास्तवकै रोमाञ्चक बनाइदिन सक्छ । तपाई जहाँबाट यात्रा शुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईले आफूलाई थप अविस्मरणीय बनाउन सक्नुहुन्छ ।
मानिस र प्रकृति को सहअस्तित्वलाई एकाकार गर्नका लागि कडा मेहनतका साथ निर्माण गरिएको छ । यो एक प्रकारको त्यस्तो सम्पत्ती हो, जहाँ नयाँपन पाइन्छ । एक पटक बस्न योग्य छ र अन्वेषण गर्न तपार्यलाई सहयोग गर्दछ ।
सो घरमा रहनका लागि एक रातका लागि मात्रै ७३० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको नेपाली रुपैयाँमा मात्रै ८६ हजार २१५ बराबर हो ।
एउटा हवाईजहाजः यो दुई शयनकक्ष भएको हवाईजहाज घर हो । ७२७ मोडलको हवाई जहाजमा तयार पारिएको उक्त घर, प्रशान्त महासागर र कोस्टारिकको बीचमा रहेको छ ।
जहाजको भित्री भागलाई स्थानीय काठ तथा अन्य कला भरेर तयार पारिएको छ । जंगली जनावरहरु जस्तै बादरलगायत पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
यस्तै समुन्द्री तटमा पैदल यात्रा समेत गर्न पाइन्छ । सो जहाजे घरमा बस्नका लागि एक रातका लागि मात्रै ३६० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा मात्रै ४२ हजार ५१७ हो ।
वाइन ब्यारेलः अमेरिकको वाशिंगटनमा रहेको वास्तवमै रेड वाइन जस्तो लाग्ने घर पनि आकर्षक लाग्न सक्छ । एउटा डबल बेडको साथ ओभर साइजको वाइन ब्यारेल रहेको छ । घरमा जम्मा, एक राम्रो वाइन जस्तै लाग्ने पोखरी रहेको छ ।
तपाईंको रमाईलोको लागि बनाइएको उक्त स्थानमा गल्फ मैदान पनि नजिकै रहेको छ । प्रतिरात २५७ अमेरिकी डलर लाग्छ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा ३० हजार ३५२ मात्रै हो ।
Prevविदेशमा युवतीलाई यस्तो सम्म गर्दा रहेछन्, जोर्डनमा बेचिएकी चेली भागेर रातारात फर्किएपछि विमानस्थलमै रुदै सुनाईन पि’डा (भिडियो हेर्नुस्)
Nextअभिनेत्री वर्षा र सविन प्रेम सम्बन्धमा लाग्यो पूर्ण विराम !
बिहेमा दा’इजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि ग’र्भव’ती श्रीमतीको ज्या’न लिए
को हुन यिनी जसको फोटो सुटले मच्चायो दुनियामा हंगामा